Statement1/2016 – Northern Alliance (Burma)
Posted November 21, 2016 January 15, 2017 NorthernAlliance (Burma)
ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် တိုက်ပွဲများအပေါ် ရှင်းလင်းချက်နှင့်
၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၁) ရက်
၁။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၀)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းမှစတင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မူဆယ် (၁၀၅)မိုင်၊ မုံးကိုး၊ ပန်ဆိုင်း၊ နမ့်ခမ်းနှင့် ကွတ်ခိုင်ဒေသရှိ မြန်မာ့တပ်မတော်စခန်းများအား မိမိတို့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်(AA)၊ ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် (KIA)၊ မြန်မာအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်တပ်မတော် (MNDAA)နှင့် တအာင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်(TNLA)တို့က မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်များ စစ်ဆင်ရေး အဖြစ် စတင်ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားခဲ့ပါသည်။
၂။ ကချင်၊ ကိုးကန့်၊ တအာင်း၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်းအစရှိသည့် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်က ထိုးစစ်များ ပိုမိုပြုလုပ်လာကာ စစ်ရေးဖိအားများ ဆက်တိုက်တိုးလာပါသည်။ အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုရှိရာနေရာများကို ဦးတည်ပြီး ၁၀၅၊ ၁၂၀ မမ လက်နက်ကြီးများဖြင့်လည်း ဆက်တိုက်ပစ်ခတ်သည့်အပြင် ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအား ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်ခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းများ ပိုမိုပြုလုပ်လာပါသည်။
၃။ နိုင်ငံတဝှမ်းလုံး ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန်အတွက် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အချို့နှင့် မြန်မာ အစိုးရတို့ ဆွေးနွေးကြိုးပမ်းနေသော်လည်း မြန်မာ့တပ်မတော်က မြန်မာပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ပျက်ပြားစေမည့် ထိုးစစ်များ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့်တွေ့ဆုံ ဖြေရှင်းရေးနည်းလမ်းကို မလိုလားသည့်အတွက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ နိုင်ငံရေး၊ စစ်ရေးများကို အလုံးစုံထိခိုက် ပျက်ပြားစေရန် မြန်မာ့တပ်မတော်က ချေမှုန်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
၄။ မိမိတို့ မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်များသည် စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းရေးကိုအထူးလိုလားပြီး နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရ တွေ့ဆုံဖြေရှင်းရန် ဆန္ဒအပြည့်ရှိသော်လည်း မြန်မာ့တပ်မတော်၏ စစ်ရေးဖိအားကိုသာ ဆက်လက်ခံနေကြရသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ စစ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးကို မလွှဲမရှောင်သာ ပြုလုပ်ကြရပါသည်။
၅။ ထို့ကြောင့် စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း စစ်ဘေးဒဏ်မှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် ခရီး သွားလာခြင်းများ ခေတ္တဆိုင်းငံ့ကြပါရန် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတို့အား မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားအပ်ပါသည်။ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင်ရှိသော ဒေသခံပြည်သူလူထုများအနေဖြင့်လည်း စစ်ဘေးဒဏ်ကို ကြိုတင်ရှောင်ရှား သွားလာကြပါရန်နှင့် တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတရပ်လုံးအတွက် မလွှဲသာမရှောင်သာပြုလုပ်ရသည့် ပူးပေါင်း စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို ကူညီပံ့ပိုးပေးကြပါရန် အနူးအညွတ်ရှင်းလင်းပန်ကြားအပ်ပါသည်။
မြန်မာပြည် မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု
Press released on fighting in Northern Shan State
and Request for local people
1. We, Arakan Army (AA), Kachin Independence Army (KIA), Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) and Ta’ang National Liberation Army (TNLA) have launchedajoint military operation as an Alliance of the Northern Brotherhoods against the Burmese military posts in Muse’s 105th Mile, Mong-Koe, Pang-Sai, Namhkan and Kutkai in northern Shan State, beginning on the morning of November 20, 2016.
2. The Burmese armed forces have been launching offensive attacks in the ethnic territories of Kachin, Kokang, Ta’ang, Arakan and Shan and military pressures are increasingly mounted. The Burmese armed forces have also intensified not only shelling 105-120 mm heavy artillery targeted at innocent civilians but also arresting, torturing and killing indigenous peoples.
3. Although there are holding discussions between Ethnic Armed Organizations and the Burmese government foranationwide peace, the Burma army has continued launching more offensive attacks that can break Myanmar’s internal peace. The Burma armed forces have been assaulting to destroy all political and military struggles of the ethnic peoples because they have no will to solve the Myanmar’s political problem by politically peaceful negotiation methods.
4. Despite the fact that our alliance of the Northern Brotherhoods truly wantagenuine peace and wish to solve political problem by political means, we have inevitably launched suchajoint military operation when constantly receiving military pressures from the Burma army.
5. Therefore, our ethnic peoples are requested to halt traveling in the northern Shan State in order to avoid from the battles during these periods of the military activities. Local peoples in northern Shan State are also appealed to takeaprecaution from these fights and to support this inevitable joint military exercise for the protection of all ethnic peoples.
1、2016 年 11 月 20 日早晨，我们—若开军（AA）、克钦独立军（KIA）、缅甸民族
民主同盟军（MNDAA）和德昂民族解放军（TNLA）以民族联军的方式对木姐 105 码、勐古、棒塞、南坎和贵慨等多地的缅军驻地进行了军事打击。
2、近期，缅军不断地向克钦、果敢、德昂、若开和傣民族地区进行军事打压， 对平民聚居区使用 105MM、120MM 等重型武器进行打击，残杀和虐待无辜百姓。
3、为了实现全国全面和平，部分少数民族革命武装组织已经非常努力和缅政府 进行和平会谈和协商，但缅军不认可“政治问题以政治协商解决的方法”，依然 在继续着破坏和平的军事行动，其目的是为了瓦解各民族的政治和军事力量。
4、我们缅北民族联军非常热爱和平，也非常希望政治问题能以政治对话方式解 决，但缅军不断的军事打压让我们不得已才组成了今天的民族联军及开展相关行 动。
5、因此，在战争期间，为了避免伤及无辜，我们希望北掸邦的所有人民暂缓远 行出门计划。我们真心希望所有北掸邦的百姓能提前避开战争区，因为我们是不 得已而为之，所以希望大家能给予支持并提供帮助。
缅 北 联 合 阵 线
၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု (Northern Alliance (Burma) နှင့် မြန်မာအစိုးရတပ်မတော်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့သောနေရာများနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အကျဉ်း⟶